ချစ်သူေ လး ကို အ လင်းပြ လိုက်တဲ့ “နေရွှေေ သွးအောင်” - Tha Dinn Oo
ချစ်သူေ လး ကို အ လင်းပြ လိုက်တဲ့ “နေရွှေေ သွးအောင်”
အရမ်းကို လိုက်ဖက် ညီလွန်းလှပါတယ်…။
နေနဲ့လ ရွှေနျဲ့မ လို ပါပဲ။
ဒီလူကြီး တွဲသမျှ ဆော်တွေထဲမှာသက်တန်းအရှည်ဆုံးနဲ့အမြဲဆုံးပဲတဲ့ ကောင်မလေးက တော်တော်လန်းလို့နေမှာ
အဲဒီကံအကောင်းဆုံး မိန်းခလေး က ဘယ်သူလည်းသိချင်နေပြီလား…?
ဒီလူကြီးလည်းယူသင့်နေပါပြီ ဒီလူကြီး ရဲ့ မဂ်လာပွဲသူများတွေထက်ပိုခမ်းနားမှာ တော့အသေချာပဲ စိတ်ကူးနဲ့တင်အားကျနေပါပြီ
credit han nyein oo
ခဈြသူေ လး ကို အ လငျးပွ လိုကျတဲ့ “နရှေေေ သှးအောငျ”
အရမျးကို လိုကျဖကျ ညီလှနျးလှပါတယျ…။
နနေဲ့လ ရှနြေဲ့မ လို ပါပဲ။
ဒီလူကွီး တှဲသမြှ ဆျောတှထေဲမှာသကျတနျးအရှညျဆုံးနဲ့အမွဲဆုံးပဲတဲ့ ကောငျမလေးက တျောတျောလနျးလို့နမှော
အဲဒီကံအကောငျးဆုံး မိနျးခလေး က ဘယျသူလညျးသိခငျြနပွေီလား…?
ဒီလူကွီးလညျးယူသငျ့နပေါပွီ ဒီလူကွီး ရဲ့ မဂျလာပှဲသူမြားတှထေကျပိုခမျးနားမှာ တော့အသခြောပဲ စိတျကူးနဲ့တငျအားကနြပေါပွီ
သိနျး(၁၀၀၀) ကြျောအလှူလေးကို ဒီနမှေ့ာစတငျလှူဒါနျးနပွေီဖွဈတဲ့ နခွေညျဦး
ပရိသတျကွီးရေ မငျးသမီးခြောလေး နခွေညျဦးကတော့ အနုပညာလောကမှာ တောကျပလာတဲ့ကွယျပှငျ့လေးတဈပှငျ့ဖွဈပါတယျနျော။နခွေညျဦးက သူ့ရဲ့ပရိသတျတှနေဲ့လညျး ရငျးရငျးနှီးနှီးဆကျဆံပွီး အမွဲပြျောအောငျလုပျပေးတဲ့ မငျးသမီးတဈလကျပဲဖွဈပါတယျ။နခွေညျဦးက ပှငျ့လငျးစှာပွောဆိုတတျပွီး သှကျသှကျလကျလကျနဲ့အရမျးတကျကွှလှနျးသူဖွဈလို့ ပရိသတျတှကေ သူမကိုခဈြမဝဖွဈနကွေတာပါနျော။ နခွေညျဦးက လကျရှိအခြိနျမှာဆိုရငျတော့ ရတနာဆိုငျတှအေတှကျ Liveလှငျ့ပွီးရောငျးခပြေးနသေလို သူမကိုယျတိုငျလညျး ရတနာတှဝေယျစုနတောဖွဈပါတယျ။နခွေညျဦးက လူငယျပီပီ စတိုငျလျခပျမိုကျမိုကျလေးနတေတျပွီး ခတျေရစေီးကွောငျးနဲ့အညီဖကျရှငျကစြှာ ဝတျဆငျတတျပါတယျနျော။နခွေညျဦးက သူမရဲ့တဈနတေ့ာလှုပျရှားမှုမှနျသမြှကိုလညျး အမွဲမပွတျမြှဝပေေးလရှေိ့ပွီး ဘယျအကွောငျးကိုအရာမဆို အရမျးပှငျ့လငျးတာဖွဈပါတယျ။ နခွေညျဦးက သူမကိုယျတိုငျလညျး သိနျးရာခြီတနျတဲ့အသုံးအဆောငျတှကေို ဝယျယူတတျသလို အပေးအကမျးလညျးအရမျးရကျရောပါတယျနျော။အခုဆိုရငျလညျး နခွေညျဦးက ဒီနကေ့စပွီး နောကျရကျဆကျတိုကျတှအေထိ သိနျး(၁၀၀၀)ကို လှူဒါနျးသှားမှာဖွဈပါတယျ။နခွေညျဦးက အလှူအကွီးကွီးလုပျရတော့မှာဖွဈလို့ အရမျးတကျကွှပွီး ပြျောရှငျနတေဲ့အကွောငျးလေးကို ပရိသတျတှအေတှကျ မြှဝလောခဲ့တာဖွဈပါတယျနျော။ Swelsone News
အဆိုတော် လင်းလင်းနှင့် ဇနီးချစ်သုဝေ ပုသိမ်ဆေးရုံကြီးကို သိန်း ၂၀၀ လှူ ဒါန်း
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပုသိမ်မြို့၊ ခုတင် ၅၀၀ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကို ဇူလိူင် ၁၁ ရက်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်းက အဆိုတော်လင်းလင်း နဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ ချစ်သုဝေ တို့လာရောက်ပြီး ငွေကျပ်သိန်း ၂၀၀ လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။အဆိုတော် လင်းလင်းနှင့် ဇနီး ချစ်သုဝေတို့ဟာ ခေတ်သစ်ဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း ကျန်ရှိတဲ့ အလှူငွေလက်ကျန်ကို ပုသိမ်ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမင်းထွဋ်ဆီ လာရောက်လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့ ချစ်သုဝေက သူ့ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ ဧရာဝတီတိုင်း သဲကုန်းအုပ်စု အုန်းချောင်းကျေးရွာမှာ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း ဆောက်လုပ်ဖို့ ငွေကျပ်၂၀၀ လှူဒါန်းပေးခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။ ကုန်းလမ်း ရေလမ်းနဲ့သွားလာရတဲ့ ဧရာဝတီတိုင်း သဲကုန်းအုပ်စု ကျေးရွာ ၇ ရွာအတွက် သားဖွားခန်းနဲ့ ကျေးလက်ဆေးခန်းလေးမှာ အလွန်လိုအပ်လှတဲ့ ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက် ဖြစ်တယ်လို့ ချစ်သုဝေက ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ အဆိုတော် […]
ဆိုင်ကယ်တိုက်မှု ကူညီပေးသူအား လက်သီးဖြင့်ထိုးသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၃ ဦးကို ဖမ်းဆီးအရေးယူ
ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပုသိမ်မြို့ ကမ်းနားလမ်းမှာ ဇူလိုင် ၁၀ ရက်ညက ယာဉ်တိုက်မှုတခုကို ဝင်ရောက်ကူညီပေးနေတဲ့ ပုသိမ်မြို့ခံတစ်ဦးကို လက်သီးနဲ့ထိုးခဲ့တဲ့ ရဲတပ်ကြပ်ကြီးတဦးအပါအဝင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၃ ဦးကို ဖမ်းဆီးအရေးယူထားတယ်လို့ ရေကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့(ပုသိမ်) က တာဝန်ရှိသူက DVB ကို ပြောပါတယ်။ ရေကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့(ပုသိမ်)မှ တာဝန်ရှိသူတဦးက “ထွက်ပြေးသွားတဲ့သူကို လိုက်လည်း ဖမ်းပေးပြီး ပြန်လာတော့ လူအုံနေတာမြင်ပြီး ပြောမိသွားတာပါ။ အပြောအဆိုက မတတ်တော့ အဲဒီလိုတွေဖြစ်သွားတာ။ ဒီမနက်ပဲ ပုသိမ်နယ်မြေရဲစခန်းမှာ အချုပ်ထဲ ထည့်ထားလိုက်ပါပြီ။ စုံခုံဖွဲ့စစ်ပြီး အရေးယူသွားမှာပါ” လို့ ပြောပါတယ်။ ပုသိမ်မြို့၊ အမှတ် ၆ ရပ်ကွက်၊ ကမ်းနားလမ်းမှာ ဇူလိုင် ၁၀ ရက်နေ့ ည ၁၁ နာရီခန့်က ယာဉ်တိုက်မှုတခု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာမှာ လူတစ်ဦး ပြင်းထန်စွာ […]
မွငျသူတိုငျး ကို အသညျး တယားယားလေး နဲ့ အခဈြပိုစမေယျ့ အိခြောပို ရဲ့ ခဈြစရာ ဗီဒီယိုဖိုငျလေး
ဆရာ၊ဆရာမတွေအတွက် ဂုဏ်ပြုတေးသီချင်းလေးတစ်ပုဒ် ရေးစပ်သီဆိုပေးခဲ့တဲ့ မေလသံစဉ်